Isihloko liyakhuluma ngokuphela Hermits, uyaqonda incazelo izwi ngokuvumelana isichazamazwi, futhi inikeza izibonelo zabantu zanamuhla sizilahlile umphakathi.
Ngubani unkom 'idlayodwa?
Hermit - ungumuntu ohlala kude, kude izindawo lapho abanye abantu baphile, futhi zilinganiselwe ukuxhumana nezwe elingaphandle. Iqiniso lokuthi lesi simo zenkolo kwakuthé chithi saka India, China, Japan nakwamanye amazwe aseMpumalanga. Futhi ngezinye izikhathi ezahlukene zomphakathi kokushiya abantu abenqaba ukwamukela indlela yokuphila yomphakathi.
Kude ezweni lanamuhla
Umbuzo uwukuthi, ngubani unkom 'idlayodwa, kuyinto efanele esikhathini sethu. Ngokwesibonelo, ngo- the Zhytomyr esifundeni kuyinto wonke umndeni ezifana: ubaba, umama nendodana. Badayisa efulethini lawo wayohlala emahlathini nengane. Zazithi ufuna ukuba kude abantu, izimoto kanye umsindo edolobheni. Ehlathini, umndeni owakhile indlu, okuyinto okwamanje akukho ukukhanya, kungekho ukushisa. Badla ikakhulu Imifino ngakubo, abhake izinkwa zawo siqu. Wonke amalungu omndeni bahlanza ku ichibi eliseduze, zilale eliphezulu lokubeka utshani.
Okuwukuphela ethile, okuyinto ukubona lo mbhangqwana - ukungakwazi ukwenza ngaphandle kwemali. Badinga bekungengenxa ukudla, kodwa ukuthengwa emabhukutifundvo ingane. abazali Boy BakaJehova bafundisa ngokwabo, luyisipho kahle bazi kahle mayelana lwezifundo eyinhloko futhi uhlelo Iyakwazi kakade ebangeni lesihlanu.
Ngubani unkom 'idlayodwa, futhi kanjani ukuba ibe ngomunye?
Uma isifiso esinjalo ukuvakashela wena ke musa ukusheshe. Futhi uzinake ukuthi uma ufuna ukuya eyodwa Hermits, kungcono ukuba sikwenze yobudala emaphakathi, lapho usunolwazi oluhle kakade ngokwanele kwezolimo ezimele. Futhi isinqumo sale rush akufanele ke, cishe, lesi sifiso kungenxa yezinkinga zomuntu siqu futhi babekhathele kakhulu. Akunakwenzeka ukuthi uzokwazi ukuphila bezvylazno wedwa njengoba unkom 'idlayodwa. Incazelo yegama elithi, ngokuvumelana isichazamazwi, lokhu okulandelayo: indoda nani.
Uma uthanda akabashiyi, kungcono ukuqala ukuthenga umhlaba edolobhaneni eduze izinkuni, futhi endlini, ngakho ebusika akanayo ukubheka indawo yokuhlala. Ngaphambi namanje unquma ukuya kude, cabanga zonke nizithibe futhi esekelwe ukuthi, nquma okufunayo: ukuhlala endaweni ehlathini akude esingaweleki, noma kude nje kusukela okumatasa komuzi. Uma isinqumo sokugcina futhi categorical ke ukulungiselela kahle: ukufunda izincwadi ezikhethekile, khuluma nabantu onolwazi. Ngakho sibhekene nabantu abanomuzwa unkom 'idlayodwa ezinjalo. Manje isinqumo ngesakho!
Ngubani iqhawe: endulo yesimanjemanje
Ehlukaniswe lomusho ngolimi lwesiNgisi
Izixazululo Software amabhizinisi nge 1s Uns.